Kuyomfica - iyona ebaluleke kakhulu nengcikitsi SDA. ngqó, impendulo ingu yisiphi isihloko ukufunda, ngoba konke okukulo imithetho, esikhathini esizayo singaba usizo kabi kule ukushayela esisebenzayo. Ngakho-ke kufanele ukhulume kanjani kuyomfica lapho singavunyelwe khona, kanye nakho konke okunye ingasho isihloko.
Ngithanda ukuqala amagama. Ngakho kuyomfica - ngaphambi kujika khona imoto (olulodwa noma eziningi), okuyinto kuhlobene ngokuqondile Ukuhamba ku izimoto ophambana nazo. Uma iqhinga Kwenziwa, umshayeli ebuya.
Namanje kukhona ezothatha ihlandla lesibili. Futhi - phambili. Abantu abaningi bavame ukudida ngayo kuyomfica. Lisho ukuthini igama elithi umqondo? Konke kulula ngangokunokwenzeka. Advance - lena inqubo lapho umshayeli wemoto ethile ihamba ngesivinini okungukuthi kunolunye amaloli, odlulayo. Badla obonakaliswe Ngamanye amazwi - kungcono nje isimo lapho imoto "sihamba" kumakhelwane wakhe. Umshayeli is hhayi kabusha emgwaqeni ophahlwe yizindlu obuhlukile, ngakho-ke lokhu iqhinga ubhekwa kuphephe kakhulu. Ngoba akufanele ukudida imigomo. Kuyomfica - into eyodwa, ukukhula - ngaphezulu.
Into yokuqala okudingeka ukufunde
Esahlukweni 11 sencwadi imithetho yomgwaqo kakhulu imininingwane ehlangene nakho kuyomfica. Futhi incwadi yokuqala lapho efundisa SDA - ngaphambi kokuthi uqale iqhinga, umshayeli kumele ngempela uqinisekise ukuthi kwindlela eyodwa, lapho efuna ukushiya imahhala. Kumelwe ukubala ukuthi unakho isikhathi esanele, nokuthi kungenzeka ukuthi ngesikhathi ukuqaliswa izenzo zabo, hhayi ohlangothini olungafanele umshini uboniswa. Lokhu kubaluleke kakhulu. Abashayeli abaningi awuligubhi lo mthetho, futhi ngenxa yalokho, njengoba umthetho, kuba esidabukisayo. Kungenxa yokuthi lokhu kwenzeka, iningi izingozi kanye nokufa kwabantu ngenxa izingozi zomgwaqo. Ngenxa yokuthi izimoto ezimbili "wayehamba" ngesivinini ishayisana amabhampa phambi - lena ngokuvamile isisulu.
Konke lokhu kudala umthetho ukuthi uthi uma izimo ezichazwe ngenhla, kukhona ingozi, cishe lesi sigameko iwayini njalo ewela umuntu owaqala kuyomfica. Lokhu kunengqondo futhi kulula ukuchaza. Phela, umshayeli akazange esiphethweni zonke pre, waqala ukushayela, ngaphandle kokucabanga ngemiphumela futhi nje ungalindi.
Elinye iphuzu okumele ngekhanda ngokufunda isihloko "kuyomfica". SDA isimo: umshayeli imoto, okuyinto mayelana ehlelwa akumelwe ukwandisa isivinini okwamanje. Kunconywa ukuthi, kunalokho, aphansi. Ngoba kungenjalo isikhathi ukuthi umuntu kufanele uchithe ukwenza inyuka iqhinga. Ngakho, kuzothatha isikhathi eside ukuya kule lane obuhlukile, futhi lokhu, okungenani - ezimbalwa amashumi amamitha. Asikho isidingo ucacise ukuthi igcwele.
Ngaphandle kwezinto ezibalwe ngenhla, kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi ukuthi kumelwe futhi kucatshangelwe. Kuyomfica asivumelekile, isibonelo, ezimweni lapho iqhubekela phambili imoto ngaphambi omunye umuntu, noma ukuzama ukugwema into. Namanje akakwazi ukuqhubeka nalo iqhinga, uma imoto eyayisesandleni kwindlela esifanayo, bafaka isignali baphendukela.
Futhi umuntu ngaphambi kokuba uqale ukuthatha isinyathelo ukuze sifeze izenzo ezidingekayo ukuze sibheke esibukweni labaqaphi elingemuva. Ngoba kungenzeka kahle kungenzeka ukuthi umshini ehavshaya kuye, futhi banquma ukwenza kuyomfica. iziqondiso Traffic ezimweni ezinjalo, ngiyasho ukuthi udinga ulinde, ukunciphisa ijubane (noma okungenani, ukuthi aseqeli), bese kuphela, uma zonke rechecking ukwenza amalungiselelo.
Futhi-ke, into eyodwa ngaphezulu. Kuyomfica asivunyelwe uma umshayeli uyazi ukuthi emva kokuphothulwa iqhinga uyahluleka ukubuyela kwindlela yayo ngaphandle kokudala ukuphazamiseka ngoba ngezinye izindlela zokuthutha (futhi, ikakhulukazi, ngoba ukuba inganqotshwa). abashayeli abaningi ukhohlwe la malungiselelo elula, ngenxa yalokho futhi singene izingozi.
imithetho kuyomfica futhi ngesikhathi ebizela othile amalungiselelo athile eziphathelene ngokushesha kangakanani udinga ukuhambisa umshayeli ngubani uhlose ukwenza iqhinga okuthiwa. Kuyinto futhi ehilelekile ezibalulekile.
Awukwazi beqala ukuthatha isinyathelo, uma ijubane lapho imoto ihamba, akwanele. Ake sithi imoto uhamba phambi umshini wokubonisa izinga lejubane 85 km / h. Uma umuntu ofisa amfice, kuphela clocked kufike ku-80 km / h - noma kunjalo-ke akunakwenzeka ukuba uqhubekele senzo. Ngisho noma ijubane lapho beat umakhelwane wakhe ngamaviyo ibanga elingamakhilomitha amaningi - akufanele ngoba ingozi. Ngokwesibonelo, uma wakwazi ukuba ukhule ufike 90 km / h, kulesi simo, ukwenza kuyomfica ephelele kudingeka 180 amamitha. Futhi esiphikisayo strip kufanele kube mahhala 360 amamitha. Kungani becabanga kanjalo? Kulula. 180 amamitha kuyadingeka ukuze umuntu onikelako ku iqhinga, nokunye futhi - izimoto ophambana nazo. Kuphela ngale ndlela ngeke ugweme ukushayisana.
Regulations liyasho kuyomfica - uma umuntu qhebeza phezulu imoto phambi kakhulu kancane, kungcono ukuba ayiyeke le uhlelo. Kusukela ngaqeda ukusebenza, umshayeli ngeke ngokuzenzakalelayo ukudala ukuphazamiseka ukuthi imoto ukuthi ngaphambi nje. Futhi kungenzeka ukuthi nguye onquma ukuba niqhubeke kuyomfica. Ngokuvamile, kuleli cala udinga ngesivinini - kuyinto isidingo sokufunda.
Lapho awukwazi ukwenza iqhinga?
Kuyomfica asivunyelwe ukwenza ezindaweni eziningi. Okokuqala - phezu zemigwaqo elawulwayo angahlelekile (uma umuntu engahlali ukunyakaza endleleni, okuyinto primary).
Okwesibili, kuyomfica at kuwelwa futhi nhlobo. Yokuwela (kanye nebanga, elise amamitha 100 kubo), amabhuloho, overpasses, imigudu (futhi ngaphansi kwabo), ekugcineni kokwenyuka, badedelane eziyingozi, izigaba lapho ukubonakala kukhawulwe - kuzo zonke lezi zindawo kanti akunjalo.
Kunezimo ezithile nge-mgwaqo lapho ungakwazi lizothola phambi ukugijima imoto. Okokuqala, kumele ingalawulwa. Okwesibili, ngaphambi empambana ubophekile ukuba uphawu komgwaqo main. amaphilisi engeziwe akufanele kube (ngaphandle izinhlamvu, abalwa kusukela 2.3.1. Ukuze 2.3.7). Lokhu kusho ukuthi ungenza iqhinga, ngaphandle emgwaqweni omkhulu ayishintshi isiqondiso kwalokhu kuhlangana.
Nokho-ke Kuyaphawuleka ukuthi ngaphambi imithetho bavunyelwa ukuba dlula ku yokuwela yabahamba ngezinyawo, uma lalingenalutho. Kodwa manje konke okushintshile, futhi manje isenzo kungavunyelwe noma uma ingxenye yomgwaqo ayinalutho.
Eminye imininingwane kufanele akutshele mayelana labo izingxenye zomgwaqo lapho iqhinga akugcini nje ezisengozini inhlawulo, kodwa futhi ekuphileni. Ngakho, amabhuloho, culverts, overpasses nemihubhe, kukhona ingozi njengoba kwindlela ezayo. Kuyomfica, ngokulandelana, akukho akufanele kube.
Ngokuvamile, abanye amabhuloho kuthiwa ngezinye izikhathi esakhiwa endaweni ngendlela ukuthi azinakwenzeka ukubona ekude. Kanti abashayeli abaningi, kancane, ekuqaleni dlula kanye, ngenxa yalokho, awuqede kuleli bhuloho, lapho travel kunzima. By the way, ngokuvamile kukhona izimpawu okuhambisanayo. Kuyomfica sibonakaliso olunezinombolo njengoba 3.20. Funda nje - kukhombisa izimoto ezimbili, kwesokunxele okuyinto egqanyisiwe abomvu. Konke ecacile, okusho asikho isidingo ukuchaza.
Funda kabanzi mayelana izimpawu
Kodwa lapho umuntu eyibona pointer ukuba 3,26, ungakhululeka bese uqale ukuhlola konke ngaphambili yokunyakaza. Lolu phawu libukeka elifanayo 3.20, kodwa kokubili izimoto - grey wawela ngokuphambeneyo imisho emihlanu. Lokhu kusho oqeda ukuvinjelwa.
ematfuba okuyingozi futhi ayidingi yimuphi izimpawu - bona kungabonwa nokunye. Nokho, ngokuvumelana nemithetho ye isethi wabo - 1.14, 1.11.1, 1.11.2. Ukubona the izikhombo idatha, kubalulekile hhayi kuphela uyephuza iqhinga, kodwa futhi ukwehlisa izinga (ngaphandle kokwenyuka emaweni).
Futhi ekugcineni, uma ukubonakala kukhawulwe (Emgwaqweni ofana nalo, noma kukhona ezinye izakhiwo kanye sezwe kungaba ethize), it is nqatshelwe dlula esayithini ezithile. Ezimweni ezinjalo, kungcono ukuya kakhulu ngokucophelela futhi njengoba ngokucophelela ngangokunokwenzeka. Futhi, njengoba kungenzeka omunye waqaphela, akubona kangaka okudingeka ngekhanda izinhlamvu. ezimbili kuphela - pointer kulokho kuvinjelwa, kanti eyesibili - ukwesulwa, futhi zenzeka ngokulandelana. Esesibili - emva ukuqhela emva kuqala.
Ekugcineni-ke Kuyaphawuleka ukuthi isihloko ehlukile noma isijeziso kuye ngezinto kuyomfica okungalungile akekho. Kodwa kukhona isahluko 12 Ikhodi Ukwephulwa Administrative. Kukhona ingxenye yesine yabantu zithi ukuhamba zibe kwindlela ezayo noma amathrekhi tram (yebo, futhi kolunye uhlangothi) kuyinto esithola esihle. Usayizi Its ayizinkulungwane eziyisihlanu. Isijeziso kuyomfica, njengoba kungabonwa, hhayi kancane. umshayeli Ungase futhi ukuphuca kuye amalungelo akhe. Igama elithi ngokuvamile izinyanga 4-6. Kubantu abaningi, ukulahlekelwa ilayisensi kanjalo ukushayela - lena ukujeziswa kweziboshwa okubi kunakho, ngoba abaningi bathi kungcono uthole isigwebo kuyomfica.
Kufanele kuqashelwe ukuthi lesi sihloko ajezise labo bashayeli abangafuni ukuthobela kuthiwa kuyomfica endaweni engafanele. Okungukuthi, lapho kwakungekho izimpawu yokulungisa.
Abantu abaningi banesithakazelo - ukuthi kungenzeka ukuba "exchange" isijeziso? Kunokuba bakhokhe yokungeneliseki? Cha, lapha konke kuncike kuphela traffic. Isijeziso? Khona makube njalo. Icala ethunyelwe enkantolo? Cishe, nazo bokuhlukaniswa amalungelo, kodwa kukhona, ekulaleleni, sizokwazi ukuzama ukuxazulula le nkinga futhi sithanda ukuzithetha.
Izindawo ukwenza iqhinga
Kuningi okuye kwashiwo mayelana lapho akwenzeki dlula. Futhi kuthiwani lapho kungaba? Lezi zindawo futhi kufanele efakwe ohlwini. Lokho okubizwa ngokuthi i izimoto ophambana nazo uvunyelwe ukuba afeze emigwaqweni emikhulu onemizila emibili. Kukhona umugqa isikhungo libukeka isakhiwo eziphukile.
Ngisho lokhu kungenziwa endleleni, lapho wonke amaviyo amathathu. Futhi kumelwe futhi imigqa eziphukile. Futhi-ke, ngaphansi komkhakha isinqumo ufaka imigwaqo, lapho imizila kuphela ezimbili and mshini - kuhlanganiswe. Kulapho kuyomfica uvunyelwe. Kodwa akubona bonke izindawo izimpawu ezifanele, ngoba zonke kuyatuseka ukukhumbula. Ngeke engadingekile.
Yini hhayi kuyomfica?
Ekuqaleni, ngathi ukuthi abantu abaningi badidekile ngokuthi izincazelo "kuyomfica" futhi "mathupha '. Manje kubalulekile ukuchaza zonke izibonelo.
Kuyomfica njengenkulumo ukuba ngaphambi ijika, okuyinto eyenzeka ngaphakathi band efanayo. Ngoba, uma ungenawo kwenzeke empambana ovundlile wokugubha - kwakungeyona izimoto ophambana nazo. Ngisho kuyomfica lakhe lingeke ladalulwa ngaphambi ijika, ngeke ngalé kwemingcele isigamu kwesokudla komgwaqo. Okungukuthi, ku ezayo kwindlela umshini futhi akabashiyi.
Futhi ekugcineni, into eyodwa ngaphezulu - ngaphambi ijika, lapho indoda eshayisa kwindlela ezayo, kodwa akazange abuyele ohlangothini ukunyakaza ezihambisana emotweni. Okunjalo iphuma.
Ngakho, uma ukhumbula konke okungaphezulu, kungenzeka ukuba zinezimoto kuyomfica. Into esemqoka - khumbula imithetho.
Njengoba ezothatha isikhundla amalungelo emva kokuphela izenzo zabo
Aries Abesilisa: uthando - dragon empilweni - umlilo
I-Futurist - izinguquko zobuciko
8 izimpawu ukuthi ozakwabo abafana nawe, ngisho noma ungazizwa ke